Ilay mpilalao an-jatony teo aloha avy ao amin'ny Nike Golf
Ny mpilalao Ignite tany am-piandohana dia nampidirin'i Nike Golf tamin'ny fiandohan'ny taona 2004, taorian'ny nilalaovany ny PGA Tour nataon'ny Tiger Woods sy ny mpitsidika hafa tamin'ny Nike tamin'ny faran'ny taona 2003. Ny mpamily vaovao Tiger dia nahasarika be. Ary io dia iray amin'ireo klioban'ny Nike Golf voalohany hahazoana voka-tsoa betsaka amin'ny tsena an-tsena amin'ny mpilalao golfa. Ity ny fanadihadintsika momba ilay mpamily Nike Ignite hatramin'izay ka nampidirina tao amin'ny tsena ny klioba:
Pros amin'ny Nike Ignite
Miara-miasa amin'ny famelan-keloka .
Fihetseham-po tsara amin'ny hitsikerana ivelan'ny foibe.
Mpilalao klioba mahaliana , profil durable à installation.
Tsinin'ny Nike Ignite
Ny endriky ny kofehy dia somary matroka.
Ao amin'ny faratampon'ny saran'ny vidin'ny mpamokatra mpamokatra lehibe.
Hevitra manan-danja momba ny mpamily Nike Ignite
Ignite dia nampidirina tamin'ny faramparan'ny taona 2003 rehefa nalain'i Tiger Woods sy ny mpilalao Nike hafa.
Hita ao amin'ny fanombohan'ny varotra 1 Aprily 2004.
Ny tongotra roa dia misy tongotra roa, 410 cc ary 460cc.
Ny NexTi, ny titanium propagandy natolotry ny Nike Golf, dia ampiasaina ao amin'ny clubface .
Ny Clubhead dia mampiasa ny "Around the Crown" amin'ny endrika stabilité sy hery bebe kokoa amin'ny clubhead.
Modely 460cc dia tonga amin'ny 8.5, 9.5, 10.5 ary 13-degre ho an'ireo mpihaino.
Modely 410cc dia tonga amin'ny modely 8.5, 9.5 sy 10.5-degre ho an'ny mpihaino.
Ny Lefties dia manana safidy eo anelanelan'ny 9.5 sy 10.5-degre amin'ny modely 460cc, amin'ny fotoana hanoratana.
Ny MSRP amin'ny famotsorana dia $ 469.
Famerenana: Nike Ignite Driver
Ny mpamily Nike Ignite dia miaina am-pitiavana. Mpitondra goavam-be izay fiakarana avy amin'ireo mpamily Nike Forged ary azo antoka fa hahazo olona niova ho an'ny Nike Golf.
Ny tanjon'ny Nike Golf dia ny hamolavolana ny asa sy ny famelan-keloka amin'ny mpamily lehibe kokoa.
Nahomby izy ireo. Ny Nike Golf, azonao lazaina, dia livin 'big.
NexTi, izay antsoin'ny Nike Golf hoe "titanium manaraka", dia ny fitaovana ampiasaina amin'ny clubface. NexTi dia fitaovana iray enti-manana namboarina manokana ho an'ny Nike; Izany dia, hoy ny orinasa, mendri-piderana, mihamahazo sy matanjaka kokoa noho ny beta-titanium.
Ny fametrahana ireo toetra manan-danja ao amin'ny Around The design (mamelatra ny fitaratra eo amin'ny tampon'ny klioban'ny klioba) dia miteraka fahamendrehana bebe kokoa ao amin'ny clubhead ary toerana mahafinaritra kokoa.
Izany no teoria. Ary toa miasa izany. Ny Nike Ignite dia nanala tsilo tamin'ireo mpilalao golf rehetra izay nanandrana azy nandritra ny herinandro maromaro. Ireo mpitsabo avo sy mpitsabo ambany, ireo mpangalatra miadana ary ireo mpikorisa haingam-pandeha, dia nahita zavatra tiany ho an'ny Ignite.
The Ignite dia manintona amin'ny fametrahana, na dia somary matavy loatra aza ny rafitra loko (indrindra ho an'ny kliobàna antsoina hoe "tsy misy"). Saingy raha ny fitarainana voalohany dia ny "famolahana loko", fantatrao fa ny klioba dia mpandresy.
Ny fikambanana dia mahatsapa ny fiantraikany lehibe, ary nahatsapa ny fandalinan'izy ireo ny afovoany fa tsy ratsy loatra tamin'ny Ignite. Ny fahatsapana, na inona na inona zava-misy, dia azo antoka fa manentana ny fahatokisana amin'ireo izay mampiasa ny Ignite.
Ny Toe- tsisim-pitodiana : Mamelona ny hipoka ve ny zavona?
Efa nandre volana maromaro izahay. Azontsika atao ny mamaly hoe: Eny. Ny Ignite dia ezaka goavana avy amin'ny Nike Golf, azo antoka ny hahazo ireo niova fo.
Cobra Golf: Famolavolana ny orinasan'ny fitaovana
Golf Accessories: Ny farany amin'ny fankalazana ny fianarana
Mizuno MX-17 Irons: Ny endri-javatra sy ny zavatra amidy omena azy
Ahoana no fomba fitafiana amin'ny lay
Ahoana ny fomba akanjo fitetezam-paritra
Ny Golf Mat dia dingana lehibe mankany amin'ny fampiharana kisary fanatanjahan-tena Mats
All About the Skate Spinner
TaylorMade r7 Steel sy r7 Ti Fairway Woods
Putter Length: Inona no mahasoa anao?
Ahoana no Hahitana Vidim-panavotana?
Top Jets Ski Ski
Inona no atao hoe Foodlot, Rano ary karazan-tsakafo?
Strategies Politeness amin'ny teny Anglisy
Inona no fahasamihafana misy eo amin'ny sakramenta sy sakramenta?
Asio kitapo maina mba hampidirana ireo fitsangatsanganana kayakanao
African American Holders - T, U, V, W, X, Y, Z
Ny teny filamatra mety amin'ny "Rodeo"
Drafitry ny lesona: Fandaharam-pandinihana sy fanodinana
Ahoana ny fomba hanampian'ny mpitarika ny Sekoly ny Quality Mpampianatra?
Toerana Tsara Hahitana Sary Vetaveta LDS (Môrmôna) sy Sary Masina
Misafidiana ireo fehezanteny gitara tsara
Alohan'ny hifidiananao karazan-java-boary
Tari-dàlana fianarana ho an'ny 'Lady with the Dog Dog' an'i Chekhov
Ny lelavon'ny lolo no lehibe hanatsara ny fahasosorana
Torolalana amin'ny dingana mahazatra amin'ny Torapolo tonga lafatra amin'ny sahan'ny Skateboard
Top 10 Tango Songs ho an'ny mpangataka
Inona no atao hoe 'lava amin'ny iray' amin'ny gileo?
Foto-kevitry ny fikomiana Mau Mau
Clay Tokens: Ny voan'ny Neolithic an'ny Mesopotamian Writing
Fampivelarana toeram-ponenana ala
Ohatra avy amin'ny Pentametera Iambika ao amin'ny Play Plays Shakespeare
Toeram-ponenan'ny efitrano fisakafoanana: Fialana amin'ny efitrano madinika
Ahoana ny fomba fanaovana ny ski amin'ny tenanao manokana